पण्डित आचार्यलाई कसले हान्यो गोली ? खुल्यो यस्तो सनसनी पूर्ण रहस्य !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पण्डित आचार्यलाई कसले हान्यो गोली ? खुल्यो यस्तो सनसनी पूर्ण रहस्य !!
काठमाडौं, २६ चैत्र । विराटनगर–१४, जतुवास्थित राजमजानकी मन्दिरमा सप्ताह श्रीमद्भागवत पुराण वाचन गर्न आएका पण्डित आचार्य श्रीनिवास गोली प्रहारबाट घाइते भएका छन्। मन्दिरमा नै बसेका उनलाई शौचालय गएका बेला शनिवार राति २ बजे गोली हानिएको थियो।आइतबारबाट पुराण वाचन सुरु गनर्गे कार्यक्रम थियो। तर, शनिबार राति नै पण्डित आचार्यमाथि गोली प्रहार भएपछि पुराण वाचन रोकिएको छ। २६ वर्षीय आचार्यको दायाँ छातीको
कुममुनिबाट गोली पार भएको प्रहरीले जनाएको छ।उनको विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। छातीमा रहेका दुई गोली आइतबार नै अप्रेसन गरी निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ। उनी खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको भनाइ छ।
नेपालगञ्जमा भोलि मंगलबारदेखि २५ गतेसम्म कर्फ्यू लगाइदैं